रबि लामिछानेका अन्धभक्त ‘कलियुग’ का नवदास हुन् ! – Everest Dainik
रबि लामिछानेका अन्धभक्त ‘कलियुग’ का नवदास हुन् !
समर्पण भट्टराई । ‘जीवनभर दलालहरुको दास भएर बाँच्ने कि उन्मुक्तिको संसारमा पनि ज्यूने ?’ अब छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला भयो । समाजमा भएका हुने गरेका अन्याय अत्याचार शोषण दमन बलात्कार भ्रष्टाचार महङ्गी मानव बेचविखन ठगी लूटको विरुद्धमा आएका आवाजलाई म सम्मान गर्छु ।
विगत लामो समयदेखि नै यी समस्याको अन्त्यको निम्ति मुक्ति र मृत्युको सपथ खाएर मृत्यु पत्रमा यातनाका हरेक दस्तावेजमा समेत हस्ताक्षर गरेर निरन्तर संघर्ष गरिरहेको मान्छे हुँ म । कुनै हनुमानहरुले व्याख्या गरेको जस्तो अमुक मान्छे म हुँदै होइन ।
हो जनताको राज्य व्यवस्था प्राप्त गर्न सजिलो छैन । टेलिभिजनको पर्दाबाट बान्की मिलाएर भट्टायर पनि प्राप्त हुँदैन । यसकाे लागि निर्मम र कठिन संघर्ष गर्न आवश्यक पर्छ ।
मुख्य कुरा केहो भने देशमा हुने अन्याय अत्याचारको समाधान एउटा व्यक्तिले निहित स्वार्थको लागि अर्थात डलरको खेतीका लागि टेलिभिजनको पर्दामा बान्की मिलाएर भन्दैमा समाधान वा अन्त्य हुन सक्छ भन्नु कलियुगका अन्धभक्तहरुको दास मानसिकता मात्रै हुन् । त्यो असम्भव छ ।
यस्तो समस्याको समाधान राज्य व्यवस्था बाटै खोजिनु पर्छ । त्यसैले यस्को समाधान वा अन्त्य पनि राज्य व्यवस्था नै हो । यसो भनिरहदा के अहिले तत्कालीन राज्य व्यवस्थाबाट यो संभावना छ त ? अहँ सम्भव छैन ।
यो राज्य व्यवस्था भ्रष्ट, दलाल, हत्यारा, बलात्कारी, घुसखोरी, कमिसन खोरलगायत विदेशीहरुको इच्छा र चाहना मुताविक संचालन भएको छ । तसर्थ यी तमाम समस्याको समाधान वा अन्त्य फेरिएको जनताको राज्य व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ । जनताको राज्य व्यवस्था चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ या गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न भने जायज हुन्छ ।
किन भने नैतिकता इमान र निष्ठा बेचेर राज्य संचालन गर्नेहरुलाई टेलिभिजनको पर्दाबाट कराएको आदर्शले छुनेवाला छैन । उनको घैटोमा घाम लाग्ने वाला पनि छैन । खोक्रो आदर्श छाँटेर परिवर्तनका गित गाउँदैमा अन्धभक्तहरुको सुदिन कहिलै आउने छैन ।
जनताले आफ्नो राज्य ब्यबस्था सजिलै मागेर, शासकले दिएको कतै इतिहास पनि छैन । त्यसैले खोस्नुको बिकल्प नरहेको हो । जसरि दलालहरुले आफ्नु लूटको स्वर्ग बचाउन बन्दुकको प्रयोग गर्छन् र त्यसैगरि सत्ता खोस्नेहरुले पनि बन्दुक समाउन बाध्य हुन्छन ।
नैतिकता इमान र निष्ठा बेचेर राज्य संचालन गर्नेहरुलाई टेलिभिजनको पर्दाबाट कराएको आदर्शले छुनेवाला छैन । उनको घैटोमा घाम लाग्ने वाला पनि छैन । खोक्रो आदर्श छाँटेर परिवर्तनका गित गाउँदैमा अन्धभक्तहरुको सुदिन कहिलै आउने छैन ।
न्यायप्रेमी परिवर्तनकारी मुक्तिकामी युवाहरुले एउटा टेलिभिजनमा आदर्श छाँट्ने अमुक पात्रलाई भगवान् मान्दै, यो उर्वर र ऊर्जाशिल जीवनको समयलाई खर्चनु भनेको दास मानसिकताको पराकाष्ठा हो । त्यसैले दास मानसिकताबाट टाढा रहन सबैलाई अपिल गर्दछु ।
किसान, मजदुर, शिक्षक, विध्यार्थी, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, कलमजिवी, मजदुरहरु उत्पीडित वर्ग जाती क्षेत्र सबै न्यायको निम्ति एक पटक यो बेथिति बोकेको ब्यबस्था बदल्न एकजुट भएर संघर्षको मोर्चामा उभिउ । भ्रष्टदलाल कमिसनखोर बलात्कारि हत्याराहरुलाइ जनताको अदालतमा कठालो समाएर उचित सजाए दिनुपर्छ ।
न्यायप्रेमी परिवर्तनकारी मुक्तिकामी युवाहरुले एउटा टेलिभिजनमा आदर्श छाँट्ने अमुक पात्रलाई भगवान् मान्दै, यो उर्वर र ऊर्जाशिल जीवनको समयलाई खर्चनु भनेको दास मानसिकताको पराकाष्ठा हो ।
राष्ट्रघाती दलाल विदेशी एजेन्टलाई यो देशबाट लखेट्नुपर्छ । हाम्रो सिमाना झण्डा गाडेर काडेतार लगाउनु पर्छ । तपाईं हामी एकजुट भएर, यो महासागर र महान अभियानमा लागौ । यसरी मात्रै हाम्रो वास्तविक मुक्ती, न्याय स्वतन्त्रता सम्भव छ, बाँकी सबै भ्रम हुन् । सचेत युवाहरुले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला हो यो जीवन भर यसरी नै दलालहरुको दास हुने कि मुक्तिको यात्रामा बलिदान दिन तयार हुने ? यो युवाहरुको हातमा छ । (यी लेखका नीजि विचार हुन्) रंगपाटीबाट साभार
ट्याग्स: Ravi lamichhane, smarpan Bhattari